दिल्ली र काठमाडौले ग्राउण्ड रियालिटी बुझ्न सकेन | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » दिल्ली र काठमाडौले ग्राउण्ड रियालिटी बुझ्न सकेन
दिल्ली र काठमाडौले ग्राउण्ड रियालिटी बुझ्न सकेन
पत्रकार, पटना (भारत) विहार
विनोद बन्धु भारतीय अखवार हिन्दुस्तानका पोल्टिकल इडिटर हुनुहुन्छ । भारत विहार पटना निवासी उहाँ नेपाल भारतको राजनीतिकलाई नजिकबाट हेर्नेमा पर्नुहुन्छ । नेपाल आइरहने बन्धुसँग पटनाको एक कार्यक्रममा भएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
नेपाल र भारतबीच देखिएको पछिल्लो सम्बन्धलाई तपाईले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
–नेपाल र भारतबीचको अहिलेको जुन सम्बन्ध छ, त्यो कुनै नयाँ होइन । नेपाल भारतबीच यस्तो पटक पटक हुँदै आएको छ । नेपाल र भारतको जुन समाजिक संरचना छ, जुन भाषा, सँस्कृति छ मलाई लाग्छ त्यसलाई एक अर्काको देशले बुझ्न सकेको छैन । त्यही भएर यस्तो समस्याहरु आउने गरेको छ । विश्वमा नेपाल र भारत मात्र यस्तो देश हो जसको सम्बन्ध कुटनीतिक रुपमा मात्र होइन, समाजिक रुपमा पनि बलियो छ । जनस्तरबाट नै दुई देशको सम्बन्धलाई चिनाइएको छ । राज्यस्तरमा त्यो सम्बन्धलाई स्थापित गर्न सकेको छैन ।
–मेरो विचारमा नेपाल भारतका लागि कति महत्वपूर्ण छ, त्यो कुरा दिल्लीले बुझ्न सकेको छैन । दिल्लीले नेपालसँग शासकको जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । भारतका लागि नेपाल कति महत्वपूर्ण छ भने कुरा दिल्लीले बुझ्न सक्यो भने त्यो नै धेरै हुन्छ । नेपालले पनि भारतसँग सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन जानेका छैनन् । जहिले पनि नेपालले आफूलाई भारत समक्ष कमजोर र निरिह जस्तो प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गरेपछि सम्बन्ध अझ बलियो हुन्छ भने चर्चा थियो तर मोदीको भ्रमण भएपनि सम्बन्धमा सुधार हुनुको सट्टा झन बिग्रिएको छ किन त्यस्तो ?
–हो, मोदीको भ्रमणले आशा गरिएको थियो कि भारत र नेपालबीच नयाँ ढंगबाट सम्बन्ध अगाडि बढ्छ तर त्यसो भएन, उही पुरानो शैलीको सम्बन्ध कायम रहयो । भ्रमणपछि सम्बन्ध झन चिसियो । त्यसको कारण हो नेपालले त्यसको म्यानेज गर्न सकेन ।
यस्तो किन हुन्छ त ?
–यस्तो हुनुको एउटै कारण हो आआफ्नो स्वार्थ । दुवै देशले आआफ्नो स्वार्थ राखेर कुरा गरिरहेका हुन्छन् । जबकि दुई देशका साझा स्वार्थ हुनुपर्ने हो । यी दुई देशले कहिले पनि समस्यालाई एजेण्डा बनाउन सकेन । त्यस्तो एजेण्डामा दुर्य देशबीच कहिले छलफल भएको मैले पाएको छैन । नेपालका नेताहरु भारत आउँदा जहिले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका कुरा मात्र गरेका हुन्छन् । कहिले पनि देशको बारेमा कुरा गरेको हुँदैन । आफू कसरी सत्तामा जाने, आफू कसरी प्रधानमन्त्री बन्ने, आफू भारतको नजिक कसरी हुनु मात्र गरेको हुन्छ । कुटनीतिक सम्बन्ध कसरी बलियो बनाउने, सहयोग कसरी लिने, विकास कसरी गर्ने, समस्या कसरी समाधान हुने यी कुराहरुको बारेमा कुरा गरेको मैले कहिल्यै पाएको छैन । देशको हितमा कुरा गरेको मैले कहिले पाएको छैन । कसलाई प्रधानमन्त्री बनेको हुन्छ, कसलाई मन्त्री बनेको हुन्छ, भारतमा आएर नेताहरुलाई भेटी त्यही कुरा गरिरहेको हुन्छ । अर्थात नेपालमा हस्तक्षेप गर्नका लागि नेपालले आफै बाटो बनाएको हुन्छ । अर्थात दिल्ली र काठमाडौले ग्राउण्ड रियालिटी बुझेका छैन ।
यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त ?
–यसलाई सुधार गर्ने एउटै उपाय हो । नेपालका नेताहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ छाडेर जनताको स्वार्थमा भारतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । जहिले कुरा गर्दा नेपाली जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कुटनीतिकस्तरमा कुरा गर्नुपर्छ । अनि मात्र सम्बन्ध सुधार हुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थमा कुरा हुँदा त्यहाँ धेरै कुराहरु भइरहेका हुन्छन्, त्यहाँ अनेक लेनादेनाको कुरा हुन्छ र त्यसले सम्बन्ध विग्रिन्छ । सिधै देशको स्वार्थमा कुरा गर्यो भने त्यहाँ केही विग्रिदैन । कुटनीतिक सम्बन्ध जारी रहन्छ ।
नेपाल र भारतबीच खास समस्या हो के ?
–म त्यस्तो केही समस्या देख्दिन । जेजति छन् साना तिना समस्या मात्र हो । दुवै पक्षले इमान्दारी पूर्वक चाह्यो भने समाधान हुन्छ तर कसैले चाहेको छैन । बरु अल्झाएर राख्न चाहेका छन् । पाकिस्तान जस्तो, चीन जस्तो समस्या नेपालसँग छैन । झिना मसिना कुराले समस्या उत्पन्न गराएको छ । र, त्यो पनि नेताहरुको स्वार्थमा मात्र । नेपालले पानी छाडेर भारतलाई तबाही गरेको आरोप भारतले लगाउने गरेको छ तर भारतले नै विभिन्न ठाउँमा ड्याम बनाएर नेपालको पानी नेपालमै थुनेर राखेका हुन्छन् । कहिले काँही त्यही भत्किदा भारतमा समस्या देखिएका हुन् । भारतले नेपालको भूमि मिचियो भन्छन् तर त्यो पनि समस्या होइन । साँध सिमा सबैतिर छदैछ, त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ तर त्यसका लागि नियत ठिक हुनुपर्छ । विभिन्न सन्धि सम्झौताको कुरा पनि नेपालले बेला बेलामा उठाई रहेका हुन्छन् तर त्यो पनि त्यति ठूलो समस्या होइन । नेपाल इमान्दारी पूर्वक त्यसलाई समाधान गर्न चाहियो भने त्यो पनि सम्भव छ ।
नेपाललाई हेर्ने दृष्टिमा पटना र दिल्लीमा के फरक छ ?
–मैले अघि नै भनेको छु कि दिल्लीले नेपाललाई बुझ्न सकेको छैन । भारतका लागि नेपाल कति महत्वपूर्ण छ त्यो दिल्ली बुझ्न सकेको छैन । त्यो पटनाले बुझेको छ । तर पटनाले बुझेर मात्र हुँदैन किनभने नीति रणनीति सबै दिल्लीबाट नै बन्छ । पटना र नेपालको घरायसी र पारिवारीक सम्बन्ध रहेको छ । नेपालमा केही भयो भने त्यसको असर सबभन्दा पहिलो असर पटनालाई नै गर्छ त्यसपछि मात्र दिल्ली पुगेका हुन्छन् । पटना नेपालको सिमावर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकाले दुखसुखका साथी भएका छन् । नेपालमा जतिपनि परिर्वतनका लागि लडाईहरु भएका छन् सबैमा पटना निकै सहयोगी भएका छन् । नेपालका नेताहरु पटनामा बसेर आन्दोलनका योजनाहरु बनाउनु हुन्थ्यो । नेपालका जति चर्चित नेताहरु हुनुहुन्छ ती सबै पटनामा बसेर नै राजनीतिक गर्नुभएको छ ।
नेपाल भारतबीच जनस्तरमा कस्तो सम्बन्ध पाउनु भएको छ ?
–जनस्तरमा राम्रै सम्बन्ध छ । तर कहिले काही राज्यको लापरवाहीका कारण त्यसमा पनि असर परेको हुन्छ । नेपाल भारत यतिका नजिक हुँदा पनि नेपालमा सबभन्दा कम भारतीय पर्यटक जाने गरेको छ । तपाईहरु पनि नेपालमा गएर त्यो रेकर्ड हेर्नुहोला, भारतको धेरै कम पर्यटक नेपालमा देखिन्छ । त्यस्तो किन त ? नेपाली प्रहरी र त्यहाँका प्रशासनले गर्ने व्यवहारका कारण यस्तो भएको हो । नेपाल घुम्न गएका एकजना कुनै भारतीय पर्यटकसँग नराम्रो व्यवहार भयो भने त्यो भारतमा आएर बोल्छन् कि नेपालमा यस्तो यस्तो हुन्छ । त्यही सुनेर अरु भारतीयहरु जान चाहेका हुँदैन । त्यसैपनि भारतीय नागरिकलाई नेपाल (काठमाडौ) मा मन पराइरहेका छैन । अलि कालो कालो भारतीय जस्तो देखियो भने नेपालीहरु हेप्ने गरेका हुन्छन् । भारत विरोधी मानसिकताले भारतीय पर्यटकमाथि असर गरेको हुन्छ । भारत फर्केपछि नेपालले राम्रो व्यवहार गरेनन् भन्छन् यसले झन सम्बन्धमा तिक्तता भएको हुन्छ ।